[ March 7, 2021 ] Sudan proposed “the formation of an international quartet committee Afaan Oromoo
[ March 6, 2021 ] World Bank Group Statement on Current Situation in Ethiopia English
[ March 6, 2021 ] Tooftaa fi Dhaadannoo Siyaasaa Hatattamaa Afaan Oromoo
[ March 6, 2021 ] World Bank concerns about ‘unrest in Ethiopia’ English
[ March 6, 2021 ] Instinctive Weyane: The Legitimate political ideology English
HomeAfaan OromooSBO: Sagalee Bilisummaa Oromoo fi Ibsa ABO
SBO: Sagalee Bilisummaa Oromoo fi Ibsa ABO, Wax. 19, 2020
Gammachuun Saba Sidaamaa Gammachuu Keenya!
(Ibsa ABO – Waxabajjii 19, 2020)
Kaleessa (Waxabajjii 18, 2020tti) Mootummaan Bulchiinsa Naannoo Sidaamaa Mootummoota Miseensota Federeeshinii Itoophiyaa keessaa tokkoo fi isa 10ffaa tahuudhaan beekamee ifatti aangoo Mootummaa Naannoo fudhate. Addi Bilisummaa Oromoo gaaffiin Mirga Hiree Murteeffaannaa Saba Sidaamaa haala kanaan (karaa nagaa, sirrii fi seera-qabeessa taheen) deebisaa argachuu isaa ilaalchisee Saba Sidaamaatiin Baga Gammaddan! oggaa jedhu gammachuu ol’aanaadhaani.
Kun Saba Sidaamaa kan Mirga Hiree Murteeffannaatiif baroota dheeraaf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa yoona gaheef Injifannoo ol’aanaa fi seena-qabeessa. Milkaawinsi fi Injifannoon Sabni Sidaamaa qabsoo isaatiin argate kun Saboota akkuma Saba Sidaamaa qabsoo Mirga Hiree Murteeffannaa irra turanii fi jiran kanneen biroofis oduu aagaa/milkii fi abdachiisaa dha. Fakkeenyummaan isaatis onnachiisaa fi jajjabeessaa dha.
Saba Sidaamaatiin irra deebinee baga injifannoo qabsoo keetii fi firii wareegama qabsaawota ilmaan keetii dhandhamatte jechaa, barootni fuul-dura keenya jiran Sabni Sidaamaa Bilisummaa, Nagaa fi Dimokiraasii (Bulchiinsa Haqaa) barootaaf dheebote kan itti mirkaneeffatuu fi dheebuu isaa bahu akka tahan hawwina.
Waxabajjii 19, 2020
Duulli Abbaa Qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti
Sudan proposed “the formation of an international quartet committee
Tooftaa fi Dhaadannoo Siyaasaa Hatattamaa
Komishinii poolisii Oromiyaa komaander Tamasgeen Waagjiraa M/Murtii waliigala Oromiyaa irratti Bilbilaanin waamamee dhufe jechuun waakkatan
Kibret: Gofta koo! ባለፉት 5 ዓመታት ስከራከርበት የነበረውን ለመጀመሪያ ጊዜ በ2 ዓንቀፆች አሣምረህ ስለገለጽክልኝ እጅግ በጣም ላመሰግንህ እወዳለሁ። Please, Sir, accept…
Jabessa: More killings and oppressions
Qeeqaa Diinaa: If Jawar is Not to be blamed for cause of the killing of Oromo, who is going to be blamed?…